राजु श्री Archives - Fonij Korea
काम गर्दा गर्दै ‘बसन्ती’को आधा दर्जन फोन आएछ । कामको हतारो सगै मेसिनको चर्को आवाजले गर्दा फोन आएको मेसो पाइन । निर्जिब मेसिनहरुका बिचमा बसे पछि फोन त के दुई चार रेक्टरको पराकम्पनहरु गए पनि पत्तो पाइन्न ।शौचालय जाने समय मिलाएर कल ब्याक गरे ।कोरियन भाषा सगै टुटेफुटेका केही अङ्ग्रेजी मिसाउदै ‘बसन्ती’ रुन लागी । रुवाइ मिसिएको बोलिमा के भन्न खोजेको हो खासै भेउ पाइन । दिउसै सोजु लाग्यो कि कसो भनेर उल्टै जिस्काए । अक्सर उ म सग जिस्कने गर्दथी । मलाइ थाहा थियो ।बसन्ती कहिले काहीँ दिउसै सोजुफुर्सदमा
राजु श्री साहित्य Comments are Off
विश्व कोरियन भाषा बक्तृत्व प्रतियोगितामा कमल गौतम छनोट
सौल . कोरियामा प्रत्येक बर्ष हुने विश्व कोरियन भाषा बक्तृत्व प्रतियोगितामा नेपालबाट कमल गौतम छनोट भएका छन् । इपीएस प्रणाली मार्फत ४ बर्ष अगाडी कोरिया प्रबेश गरेका गौतम बक्तृत्व प्रतियोगिताका लागि छनोट चरण पार गर्दै सहभागी हुन लागेका हुन् । यहि मे-१४ तारिक मंगलबारका दिन सउल स्थित KHYUNG HEE UNIVERSITY को क्राउन हलमा हुन लागेको २२ औं विश्व कोरियन भाषा बक्तृत्व प्रतियोगितामा कमलले पहिलो पटक नेपालीको तर्फबाट सहभागी जनाउन लागेका छन् । KHYUNG HEE University र योन्हाप न्युजको संयुुक्त आयोजनामा हुन लागेको उक्त कार्यक्रममा ५८ देशका १३१६ प्रतियोगी माझ लेखनफुर्सदमा
राजु श्री कोरिया Comments are Off
कोरियामा नेपाली नेताहरुको लस्कर खासमा के सिकेर देश फर्कन्छन् ?
तत्कालिन अबस्थामा जापानको चरम उपनिबेशमा रहेको कोरियाले छोटो समयमा यति चमत्कारिक रुपमा बिकास गर्ला भनेर कमै मुलुकहरुले आकलन गरेका थिए । कोरिया संसारको यस्तो देश मध्ये एक हो जुन देशको एउटै पुस्ताले भयाबह युद्द ,चरम गरिबी र पछिल्लो बिकाशको उच्चतम रुपलाई एकैपटक स्पर्श गर्ने सौभाग्य पायो । जापानी उपनिबेशबाट कोरिया स्वतन्त्र हुँदै गर्दा कोरियामा युद्दका डोब, टुहुरा जनता ,जापानी सैनिकले जबर्जस्ति करणी गरेका बिक्षिप्त बलात्कृत महिला र अथाह भोकमरी बाहेक केहि थिएन भनेर आजका प्रौढ नागरिकहरु दन्त्यकथा जस्ता लाग्ने कुराहरु सुनाउने गर्दछन् । मुलुक स्वतन्त्र भए पश्चात् यी याबत पिडाहरुलाइफुर्सदमा
राजु श्री बिचार / अनुभूति Comments are Off
कोरियामा निशुल्क भनिने लाइन फोन आतंक, नेपालीबाटै नेपाली ठगिएको गुनासो
हातमा मोबाइल चलाउदा चलाउदै तपाइको फेसबुकमा कुनै सुन्दर युबतिको आइडिबाट पिलिक्क फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउछ । सामाजिक सन्जालमा मित्रता गास्न अनुरोध पठाउने प्रायलाई अस्वीकार गरिदैन ।स्विकार नै गरिन्छ । अथवा कुनै कम्पनी या ग्याजेटको नाम राखेर पनि तपाइलाइ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउन सक्छ । तपाइलाइ अनुरोध पठाउने ब्यक्ती या कम्पनीका फेसबुक सर्च गर्नु भने भित्ताभरी मुल्य र स्किम सहित राखिएका मोबाइल , ल्यापटप, ब्लुटुथ जस्ता सामानका फोटाले फेसबुक भरिएका हुन्छन् । मित्रता बने पछि उक्त आइडीहरु मार्फत केही दिन पश्चात् तपाइलाइ म्यासेज आउन सक्छ । तपाइले कुरा गर्न शुरु गर्नु हुन्छफुर्सदमा
राजु श्री Breaking News, बिचार / अनुभूति Comments are Off
सौल, कोरिया बिश्वको कुनै पनि देशको पुजी बजारलाइ उक्त देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको बिकाश कुन गतिमा अघि बढेको छ भन्ने कुरा शेयर बजारको सुचांङ्कले जनाउने गर्दछ । बजारबाट पुजी परिचालन गरेर उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गरि आर्थिक पहुँचलाई बलियो बनाउन सक्ने भएकोले समेत यसलाइ अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा हेरिएको हो । २४ बर्ष अगाडीबाट शुरु भएको नेपाली शेयर बजार अझै शिशु अबस्थामै छ । प्राबिधिक रुपमा होस या बजारको गति र परिधी नै किन नहोस् यसले अझै खुलेर आफ्नो आकार लिन सकेको छैन ।यद्दपी बिगतलाइ हेर्दाफुर्सदमा
कोरिया टेकेको एक हप्तामै नेपाल फर्कनु पर्दा …!
कथा… पाँच बर्षे पहिलो कार्यकाल सकेर दोश्रो कार्यकालका लागि कोरिया प्रबेश गरेको जम्मा जम्मी एक हप्ता नबित्दै खै किन हो तत्काल नेपाल फर्कनु पर्ने भयो । कारण म आफैलाइ थाहा छैन ।जे भएपनि नेपाल जाने निधो गरिएछ । पछिल्लो पटक तीन महिना भन्दा बढी नेपालमा बिताइयो ।एकहप्ता अगाडि मात्र कोरिया टेकेको छु । बसुन्जेल दिक्क लागे पनि हिड्ने बेलामा घर परिवार र छोराछोरीको माया जत्ति लाग्थ्यो नेपालको माया पनि त्यतिनै लागेर यो मन भक्कानियो ।त्यो मायाको तिर्सना फेरि पूरा हुने भएछ ।अर्थात् नेपाल जाँदै रहेछु ।कारण म आफैलाइ थाहा छैनफुर्सदमा
कोरियाका संघसस्थामा जुँगाको लडाइ मात्र कि बास्तबिकता पनि ?
यहि २६ तारिक आइतबार मध्यान्ह एकाएक सामाजिक सन्जालहरुमा ‘कोरियन प्रहरीद्वारा नेपालीहरु माथि व्यापक धरकपड ‘ भन्दै अपुष्ट स्टाटसहरु आउन थाले । केहीले व्यंग्य गर्दै अबको केही दिनमा कोरियाका वरिष्ठहरुको हुल एउटै प्लेन चढेर नेपाल ओर्लिदा त्रिभुवन बिमानास्थलमा राष्ट्रध्यक्षले स्वागत गर्ने छिन् भन्दै लेखे । भने कोहिले प्रहरी धरकपड प्रती घोर भत्सर्ना गर्दै प्रहरीलाइ सुचना दिने जो कोहि भए पनि रोष प्रकट गर्दै निन्दा ब्यक्त गरे । धेरैको स्टाटसहरु व्यंग्य मै केन्द्रित थिए ।स्टाटसहरु यति भाइरल भए कि मानौ अब कोरियामा कोहि नेपाली रहने छैनन । यति स्टाटस देखे पछि योफुर्सदमा
बिश्वकर्मा समाज कोरियाले छुसकमा बृहत भेला आयोजना गर्ने
बिश्वकर्मा समाज कोरियाले यहि छुसकको अबसर पारेर चियापान कार्यक्रम तथा शुभकामना आदन प्रदान सहित बृहत् भेला आयोजना गर्ने भएको छ । कोरियामा कार्यरत रहनु भएका बिश्वकर्मा समुदायका साथिहरुलाइ एक जुट गराउने उदेश्यले उक्त भेला आयोजना गर्न लागिएको आयोजकले बताएको छ । यहि अक्टोबर ४ तारिकका दिन सुवनको पुर्णिामा रेस्टुरेन्टमा हुन लागेको भेलाले आफ्नो कार्यसमितीलाई समेत बिस्तार गर्ने योजना रहेको सन्तोष बिश्वकर्माले जानकारी दिए । साथै कोरियामा रहनुभएका सम्पुर्ण बिश्वकर्मा साथिहरुलाइ दिउसो ठिक १२ बजे पुर्णिामा रेस्टुरेन्ट सुवनमा उपस्थित भइदिनु हुन अपिल समेत गरेका छन् । बिगत केही समयदेखि कोरियामा कृयाशिलफुर्सदमा
राजु श्री प्रमुख समाचार No Comments »
राजदुतको उपस्थितिमा कोरियाको ख्वाङ्जुमा अहिलेसम्मकै बृहत् कार्यक्रम हुने
यहि २७ तारिक आइतबारका दिन छल्लानाम्दो ख्वाङ्जुमा अहिलेसम्मकै बृहत् सेमिनार हुने भएको छ । नेपाली सामुदायिक समिति ख्वाङ्जु र एन आर एन ए क्षेत्रीय कमिटी ख्वाङ्जुको संयुक्त पहलमा उक्त सेमिनारको आयोजना हुन लागेको हो । सेमिनारमा मानसिक तनाब,स्वेच्छिक अबकाश, डिप्रेसन, नेपालमा लगानिका सम्भावना जस्ता बिबिध बिषय हरुमा अन्तर्कृया हुने आयोजकले बताएको छ । कार्यक्रमलाई कोरियाका लागि महामहिम राजदुत अर्जुन बहादुर सिंह , कार्यबहाक राजदुत किरण शाक्य, डा. देबि बहादुर बस्नेत र कोरियाकै चर्चित साइकोलोजिस्ट प्रोफेसर रे क्युन होले उल्लेखित बिषय हरुमा जानकारी दिने बताइएको छ । कार्यक्रम निर्धारित समय अनुसारफुर्सदमा
सोल, नयाँ शक्ति पार्टीका संगठन बिभाग प्रमुख देबेन्द्र पौडेल र प्रबाश प्रादेशिक समितिका सह-सम्योजक शंकर भन्डारी कोरिया आउने भएका छन् । नयाँ शक्ति पार्टीको प्रबाश संगठन अन्तरास्ट्रिय नेपाली समाज कोरियाले आयोजना गर्न गैरहेको प्रथम अधिबेशनलाई सम्बोधन गर्न नेताद्वय कोरिया आउन लागेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज कोरियाले यहि जनवरी २९ तारिकका दिन भब्य रुपमा सौलमा आफ्नो प्रथम अधिबेशन गर्न गैरहेको छ । गत जेठ ३० गते औपचारिक रुपमा पार्टी घोषणा पश्चात् कोरियाले प्रथम अधिबेशन समेत गर्न लागेको हो । अधिबेशनलाई सफल पार्नको लागि सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सम्योजक हेमन्तफुर्सदमा